Showing ११-२० of ३७१ items.
त्यो रातको पर्खाइ
यो कुरा हो चैत्र महिनाको त्यो एक रातको जून रात खूब हावा हुरी चली रहेको थियो । रुखका हाँगाहरु सऱ्यांग सऱ्यांग आवाज गर्दै यता उता हावा कै बेगमा हल्लिदै थिए । बाहिरबाट छिमेकी घरको बेगसँग हल्लिएको टिनको छानाको आवाजले हावाको गतिको संकेत गरिरहेको थियो । बाहिर एक्कासी बिजुली चमके पछी चट्यांग गरेर परमाणु बम पड़के जस्तो आवाज आयो । मेरो मन त्रसित भयो । बिस्तारै सानो सानो पानीको थोपा तप तप गर्दै झरी बर्षन थाल्यो । सायद पानीको थोपाको दौढ थियो होला, त्यसैले झरीको गति बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गयो बढ्दै गयो । म घरको सानो कोठामा सूती रहेकी थिए । अघिको चट्यांगले घरको बिजुली गएको हुनाले कोठा पूरै आन्धकारमय भयो ।
‘जुन खोलाको दुवाली उही खोलाको चपरी’ ठाउँ अनुसारको रहनसहन हुन्छ । मान्छे अनुसारको बानी व्यहोरा हुन्छ । हरेक मावनमा केही न केही भिन्नता हुन्छ । यो दुनियाँमा भएका मानवका मानवीय स्वभाव नै यही हो । सबै एकै स्वभावका मानिस भएमा त त्यो त मानवीय गुण नै भएन नि । एउटै ड्याङको मुला जस्तो भैहाल्छ नि । अरू मानिसभन्दा तपाईमा के पृथकता छ ? साझा गुणहरू के के मिल्छन् ? कोही कसैसँग पनि नमिल्ने गुण तपाईमा के लुकेर बसेको छ ? एक पटक ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस् त ? कोहीलाई परपर बोलिरहनु पर्ने हुन्छ । कोही कसैलाई जति धेरै फटाहा बोल्ने अवसर पायो त्यति नै संसार विजय गरेको आभास पाउँछन् । कोही कसैलाई सभासम्मेलन
इनरुवामा 'दमनको राप' हेर्न गाउँ गाउँबाट दर्शक
भण्टाबारी । ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०४६ मा आधारित यथार्थबादी नाटक "दमनको राप" सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा सुरु भएको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनको झल्को देखाउने उक्त नाटक इनरुवा नगरपालिकाको आयोजनामा आइतबारबाट इनरुवास्थित कमल टाकिजमा सुरु भएको हो । आइतबारबाट सुरु भएको नाटक तीनदिनसम्म चल्नेछ । प्रजातन्त्र ल्याउने २०४६ सालको जनआन्दोलनमा ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकका प्रधान सम्पादक तथा कवि राजकुमार कार्की लगायतले भोगेको यातना उक्त "दमनको राप" नामक नाटकमा दर्शकहरुले हेर्न सकिने नाटकका निर्देशक बिक्रमश्री बताउँछन् । जनआन्दोलन मार्फत देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि कार्की लगायतले खेलेको भूमिका तथा प्रहरी प्रश
भाषा तथा संस्कृतिक विद जोशी सम्मानित
विराटनर । ‘सुर्दशन–कपिला सिरपा’ द्धारा २ लाख राशीको पुरस्कारबाट भाषा तथा संस्कृतिक विद् सत्यमोहन जोशीलाई सम्मान भएका छन् । झी पुचः का संरक्षक एंव समाजसेवी विराटनगर १० का सुर्दशन बहादुर श्रेष्ठले स्थापना गरेको १५ लाखको अक्षयकोषबाट जोशीलाई काठमाण्डौमा एक भव्य समारोहको बिच सम्मान गरिएको हो । जोशीलाई संघिय गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले कदर पत्र र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए । झी पुचः (नेपाल भाष तथा सांस्कृतिक संघ) विराटनगरले नेपाल भाष तथा संस्कृतिको संरक्षण, सवद्र्धन एंव जर्गेना गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई प्रत्येक २ वर्षमा कदर पत्रसहित नगद २ लाख रुपैयाँ
वैरागी काइँलाको त्यो प्रेरणा
कुनै बौद्धिक व्यक्तिको भारी बोक्न परे, त्यो भार उठाउने जाँगर सविनय चलाउन चाहन्छु म । आफ्नो जीवनलाई कसैको भारी बनाउने त कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । म आफ्नो भारी अरूलाई बोकाउन पनि चाहन्नँ । प्रिय मित्र कमल तिगेलाको यस्तै भारी बोक्ने अवसर जु¥यो । उहाँले विद्यावारिधि शुरु गर्नुअघि मसँग पनि केही छलफल गर्नुभएको थियो । विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वसँगको छलफलपछि कमलजी गुरु थाप्न समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनको निवासमा पुग्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो । कुन्नि कुन विश्वासले हो, उहाँले मलाई नै साथी रोजेर डा. भट्टचनकहाँ लैजानुभयो । त्यो बेला एउटा लिम्बु सँस्कृतिलाई पनि कमलजीले आत्मसात गर्नुभयो । त्यो थियो, कस
प्रकाशित मितिः फाल्गुन ३, २०७६